Nweta akwa nhicha Machine, nweta akwa nhicha nchekwa, nweta akwa nhicha mpịachi Machine - Comming
anụ ahụ ígwè
Dongguan Comming Machinery Company nyekwara site Bmax mba si Dongguan obodo, nke bụ nke maturest ebe-pearl riverdelta nke china, nakwa dị ka-emechi ka Songshan Lake (Ọmụmụ ebe), nke bụ belongshigh & ọhụrụ-technology ebe na ala dị larịị na n'ụzọ zuru okè ulo oru yinye usoro dị ka nakwa dị ka ike ikuku nke ọhụrụ; na pụtara oge, anyị factory nwekwara obodo na ọlaedo korido n'etiti guangzhou na Shenzhen, dị nnọọ 1 awa ụgbọ okporo ígwè si Hongkong na ọkara awa f rom guangzhou anyị factory ozugbo; anyị ebumnuche na provideefficiently anụ ahụ n'ịtụgharị igwe na peripherial kenha akpaka mbukota igwe.
Anyị bụ ndị na-humanized management dị ka ụmụ mmadụ ụkpụrụ mgbe niile ebe ọ bụ na ike, anyị na-anọgide na anyị inwe si expe rienced ọhụrụ na lekwasị n'ụzọ, anyị na-atụkwasị obi pụrụ ịdabere na q uality + Humanized ọrụ + Maintaince nanị dị ka anyị emebe ụkpụrụ, weare ọkọdọ akwado na nkwenye site ahịa si niile nke ụwa dị ka North amercian, South amercian, Middleeast, Eshia na-adịghị anya, anyị onwe anyị na mbupụ ikike aha si China ọchịchị na succes Sed mma quality management usoro ISO9001: 2008
Anyị na-pụrụ iche na iche iche anụ ahụ n'ịtụgharị igwe nakwa dị ka abịa peripherial packi and igwe dị ka ụlọ mposi mpịakọta rewinding igwe, Obere jumbo conwinding igwe, usekwu towel conw inding na lamination technology, nweta akwa nhicha usoro (gụnyere-ebi akwụkwọ na lamination), apịaji towel akwụkwọ (Lamination) were gabazie ! anyị na-hụ na anyị nwere ike imeri a ahịa site na anyị All-gburugburu & mmehie cerely Cooperation.
CJ-S100A n'akpa uwe anụ ahụ ịkpakọba Machine
BZ-ZW450 Automatic Okpomọkụ Ada Ada Packaging Machine
BZ-R200 Automatic Ihu mbukota Machine
BZ-J200 Automatic Onye Kechie mbukota igwe
Okwu: 3th ulo oru mpaghara, xiasha n'obodo nta, na shipai obodo, Dongguan obodo, guangdong n'ógbè, PRC
welcome kpọtụrụ na anyị ma ọ bụrụ na i nwere ihe ọ bụla ase, ihe niile anyị na otu ga-abụ dị na ị na 24 awa